IGenymotion: Isisuli se-Android seGNU / Linux | Kusuka kuLinux
IGenymotion: Isisuli se-Android seGNU / Linux
Ukufaka kwe-Linux Post | | Android, I-GNU / Linux, Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko
Sanibonani, Bafundi be-cyber abathandekayo, kulokhu sikulethela I-Genymotion uhlelo oluhle kakhulu engiqale ukulusebenzisa yeqa ukulinganiselwa kobuchwepheshe be-Hardware ne-Software ku-Smartphone yami.
I-Genymotion: i-emulator ethile yesikhulumi sokuxhasa Android, ekhipha ngokushelelayo nangokushesha okwehlukile amadivayisi eselula (Izingcingo namathebulethi) ngokuya ngalolu Hlelo Lokusebenza. Okwalabo ku- I-Windows Windows basebenzisa IBluestack, Genymotion kuyisinqumo esingcono kakhulu se-emulator Android futhi usebenzise zonke izinhlobo ze izinhlelo zokusebenza nemidlalo kuma-Operating Systems wethu amaningi (iWindows, iMac noma i-GNU / Linux).
I-Genymotion Kuhle ngaphandle kokusetshenziselwa ukuhlola imidlalo nezinhlelo zokusebenza, ukuze lula ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lwe-Android. Okuningi kwe Abasebenzisi ababhalisiwe abayizigidi ezingama-4.500.000, abaningi basakaza phakathi kwezinkampani ezinkulu ezingaphezu kwe-10.000 iqinisekise ukuzinza nokusebenza kwayo. Le emulator isebenzisa I-VirtualBox (Imishini Ebonakalayo) ukusebenzisa i- Izindawo Zokusebenzisa (Izingcingo Ezingokoqobo Namathebulethi) lokho futhi kusekela izinhlobo ezahlukahlukene ezindala nezamanje, ezizinzile noma zokuhlola, lapho ungahlola khona izinhlelo zakho zokusebenza zesikhathi esizayo ze-Android namadivayisi weselula wangempela.
Mhlawumbe abaningi bayazi ngamaphrojekthi afanayo, kepha iqembu eliphethe i- I-Genymotion ukwazile ukwethula i-interface elula ekwazi ukuxhasa i-Hardware ehlukile ngezinguqulo ezihlukile ze-Android zanoma yiluphi uhlobo lomsebenzisi, Ngaphandle kokukhohlwa abathuthukisi okuyizinhloso zayo eziyinhloko zemakethe ngakho-ke imodeli yebhizinisi.
Lokho wukuthi, sebazuzile ngokuchofoza okumbalwa okulula ukuvumela umsebenzisi ukuthi adale Isibonelo, umshini obonakalayo okhipha amadivayisi ngokuya ngemikhiqizo yemikhiqizo evela ku- I-Google, HTC, Motorola, Samsung, Sony, phakathi kwabanye, futhi kwe- izilungiselelo ezahlukahlukene ze-Android 2.X, 3.X, 4.X, 5.X no-6.X, ungeza okwehlukile izinqumo zesikrini. Futhi okuhle kunakho konke lokho ngokuhamba kwesikhathi inani lamadivayisi nezinguqulo ze-android ezitholakalayo liyanda njengoba ubuchwepheshe buqhubeka.
Imishini ye-Genymotion Virtual yamanje unikeze konke izici ezibalulekile kuyadingeka ku- Idivayisi yeselula, njengokusebenzisa ukuxhumana kwethu kwe-inthanethi, ukulingiswa kwendawo yethu nge-GPS, ukulingiswa kwekhamera, isimo sebhethri, ukujikeleza kwedivayisi, nokufakwa kwe Isitolo se-Google Play futhi cishe noma yiziphi izinhlelo zokusebenza ezisemthethweni noma ezingekho emthethweni ozikhethele zona. Njengoba kusobala ngenxa yezinkinga zelayisense, I-Genymotion ayifaki lutho oluvela ku-Google ngokuzenzakalela, noma ngabe kunini noma nini, lokhu kungaxazululwa. Yize ingekho inkinga, kusukela I-Genymotion ikuvumela ukuthi ufake noma iyiphi i- apk o zip ukuhudula ifayela ngaphezulu kwe-emulator. Ngakho-ke singabheka amakhasi amaningi atholakala ngokuqukethwe okungekho emthethweni kwe-Android bese ukhetha Izinhlelo ngefomethi apk o zip, njenge umagazine bese ufaka noma yikuphi okuhambisana nedivayisi yethu elingisiwe.
Inkampani iyasekela I-Genymotion banikela futhi ama-akhawunti we-premium kufaka phakathi ukuthinta irimothi kusuka kwenye idivayisi, noma I-Pixel iphelele ukufeza ukwakheka kwezinye izinhlelo zokusebenza njengoba kuzovezwa kudivayisi ye-X, noma ukwazi ukuqopha i-screencast (ividiyo) kusuka kusixhumi esibonakalayo.
Ngokufingqa, I-Genymotion okwamanje enye ye-cross-platform emulators yamahhala ye-Android. Ayiguquguquki kuphela, inamandla amakhulu, kulula ukuyisebenzisa kepha ilungele bobabili onjiniyela be-Android kanye nomsebenzisi ojwayelekile. Kusinikeza ithuba lokulingisa iqoqo elibalulekile lamadivayisi ahlukile we-Android, lapho ungangeza khona ukusetshenziswa kwekhibhodi ye-PC negundane, ukufinyelela kwi-Intanethi nezinye izinto eziningi ngokuzenzakalela, njenge-geolocation nokukhulisa / ukunciphisa usayizi wewindi. Ngaphandle kwezilungiselelo zokusebenza I-ADB (i-Android Debug Bridge), inketho ebekelwe abasebenzisi abaphambili. Noma imuphi umsebenzisi angasebenzisa I-Genymotion asikho isidingo sokumisa noma yini.
IGenymotion isebenza njengentelezi, Ezingeni lokusebenza, nge I-1 GB ye-RAM ne-CPU eyabelwe i-1 ingasebenzisa idivayisi elula ene-2.X yenguqulo ye-Android ne-4 GB kanye nama-CPU ama-2 kuze kufike kumadivayisi amahle kakhulu atholakala emakethe ngenguqulo yakamuva ye-Android (6.X ). Cishe yonke into isebenza kahle futhi kunezinto ezimbalwa kakhulu ezifana Imidlalo eyindida kakhulu evame ukungadlalwa.
Uyifaka kanjani futhi uyisebenzise kanjani iGenymotion
Sicabanga ukuthi sesivele siyifakile VirtualBox bakithi Uhlelo Lokusebenza lwe-GNU / Linux, mhlawumbe kunguqulo yayo yakamuva kanye ne iphakethe lesandiso ifakiwe, siyaqhubeka nokuyilanda kusuka kufayela lakho le- iwebhusayithi esemthethweni (Genymotion), ukubhalisa nokuchofoza inkinobho «Khetha uhlelo», ewindini elilandelayo esigabeni "Ngamunye" Endaweni "ISISEKO" chofoza inkinobho «Qalisa ».
Ewindini elilandelayo kubizwe «Landa iGenymotion» khetha uhlobo lwephakheji Ubuntu 14.04 / DEBIAN 8 (32 noma 64 Bit), noma ku Ubuntu 15.04. Uma usulandiwe, faka iGenymotion enkombeni oyithandayo. Usebenzisa umyalo womyalo ngezansi, uma kungenzeka ukuthi ulande inguqulo engu-64 bit ku- Ubuntu 14.04 / DEBIAN 8:
Ifaka bonke abasebenzisi.
Ukufaka kufolda [/ opt / genymobile / genymotion]. Uqinisekile [y / n]?
Cindezela ngokuvuma ngokhiye "nokuthi" bese kuba ukhiye «FAKA»
Uma konke kuhamba kahle, izophonsa le miyalezo elandelayo:
- Ukuzama ukuthola isethi yamathuluzi ye-VirtualBox …… .. KULUNGILE (Inguqulo evumelekile yeVirtualBox itholakele: 5.0.16r105871)
- Kukhishwa amafayela ………………………… .. .. KULUNGILE (Ikhiphela ku: [/ opt / genymobile / genymotion])
- Ukufaka isithonjana sesiqalisi ………………… Kulungile
Ukufaka kwenziwe ngempumelelo.
Manje usungawasebenzisa la mathuluzi kusuka ku - [/ opt / genymobile / genymotion]:
Manje usungagijima Uhlelo lokusebenza lwe-Genymotion kusukela Imenyu yezicelo, isigaba sohlelo.
Ngemuva kokwenza nokwakha i-MV yakho yokuqala ngeDivayisi ekhethiwe ne-Android, ngincoma uqobo lwami ukuthi useshe futhi ulande amaphakheji alandelayo azofakwa kuqala kuSystem yakho ukuqala ukusebenza ngempumelelo kwe-Android Emulator yakho:
b) Iphakheji elihambisana ne-Google Play Isitolo noma iyiphi imeta-package yezinhlelo zokusebenza ze-Google ye-Android Version etholakalayo. Isibonelo: google-play-5-12-9-en-android.apk ó pa_gapps-modular-pico-5.1-20150315-signed.zip
Ngemuva kwalokhu ungafaka konke okufunayo noma ulungiselele idivayisi yakho njengoba kudingeka.
Nazi ezinye izithombe ezikhombisa amandla we I-Genymotion:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Android » IGenymotion: Isisuli se-Android seGNU / Linux
Ngabe usebenzisa i-KDE4 ezithombeni?
Yebo. Bengisebenzisa i-KDE 4 ku-DEBIAN 8 kuze kube izolo, sengivele ngifaka i-KDE 5 ku-DEBIAN 9.
Kuyathakazelisa kakhulu, ukuhlola imidlalo ye-Android ku-linux efana ne-888poker. Kulondolozwe ephaketheni lami. Umnikelo omkhulu u-Ing. Jose Albert, njengokujwayelekile
I-toño g kusho
LEBlog iyinethi futhi wena injiniyela UMTHETHO .YYYYYY !!!!!
... kunjalo, ngingumuntu othanda abalandeli, yini inkinga
Phendula Toño g
Uhlelo lokusebenza oluhle kakhulu, kuhlala ekugcineni ukugqamisa ukuthi amaphakheji weGenymotion-ARM-Translation_v1.1.zip ne-Gapp (anezinguqulo eziningi ezahlukahlukene ngakho kufanele ukhethe okulungile kwidivayisi yakho ye-Android), uma usulanda:
Ukufaka ngayinye, vula idivaysi ebonakalayo ye-Android bese uhudula bese uphonsa ifayili, bese uma usufakiwe cisha idivaysi ebonakalayo bese uyivula futhi, kanye kwifayela ngalinye.
Kufanele futhi ube ne-akhawunti ye-imeyili ukuze isebenze kahle.
Noma kunjalo, kufanele ngabe ngenze okuthile okungalungile ngoba ngithola iphutha ngeGoogle + noma into enjalo, ngizobona.
Umsizi omuhle uGuillermo ekushicilelweni!
Uhlelo lokusebenza oluhle, noma kunjalo, bengikhungathekiswa inkinga (engahleliwe) yokuthi bekufanele ngisebenze ne-virtualization yenethiwekhi ngeVirtualbox, ngoba iqale kwesinye isikhathi (bambalwa kakhulu), nangezinye izikhathi (iningi) ukubonwa ngocingo ...
Ekugcineni ngakhetha ukubonakala ku-QEMU okunikezwa yi-Android SDK ...
Isixazululo enkingeni yokuthayipha ngeSpanishi:
Tildes: cindezela i-quote eyodwa eduze kwe-0 bese unkamisa.
kanye ne-umlaut enesilinganiso esiphindwe kabili (shift + 2) bese kuba u.
Vele, ungakhohlwa izinto ezimbalwa: ngayo yonke i-genymotion evaliwe evulekile i-VirtualBox bese ulungisa umshini owenziwe ku-genymotion (ungaqali ukusuka lapha, kepha singakwazi ukumisa):
yenza kusebenze ibhodi yokunamathisela enamacala amabili: Okuvamile - Ithebhu ethuthukisiwe - Ukwabelana ngebhodi yokunamathisela: Eqondiswa kabili.
Hudula bese uphonsa: Ngibeke iBidirectional, amafayela engihudula kusuka ku-linux ngiya kudivayisi ebonakalayo iwafaka kumkhombandlela wokulanda (ifolda), kepha enye indlela azange ngiphumelele.
Yamukela uphinde uvale i-VirtualBox.
Ukukopisha amafayela kusuka kudivayisi yeselula kuya ku-linux:
Qala idivaysi ebonakalayo kusuka kuGenymotion bese ufaka uhlelo lokusebenza le- "The Olive Tree" Ssh Server, uyiqale bese ubheka i-IP kanye nechweba elisebenza kulo, ngicabanga ukuthi lihlala likhona (kimi) i-IP 10.0.3.15 ne-port 2222, umsebenzisi yi-ssh ne-password nayo i-ssh.
Ku-VirtualBox - Lungiselela, kwimenyu ye-Network, i-Adapter 2 ithebhu, chofoza ku-Advanced, chofoza ku-Port Forwarding button, engeza umthetho ngesithonjana esiluhlaza +: Umthetho 1, TCP Protocol, Host IP 127.0.0.1, Host Port 2222, Isivakashi IP 10.0.3.15, Isivakashi Port 2222.
Qala i-GenyMotion nedivayisi ebonakalayo, manje kusuka ku-terminal ku-linux ungakopisha noma yiliphi ifayela noma umkhombandlela ngomyalo:
scp -P 2222 -C -r ssh@127.0.0.1: / isitoreji / okulingisiwe / 0 / INDLELA YOKUQALA / IFAYILI LOKUQEDELA
noma enye indlela ezungeze:
scp -P 2222 -C -r ORIGIN PATH / ORIGIN ssh@127.0.0.1: / isitoreji / okulingisiwe / 0 / INDLELA YOKUPHILA
scp -P 2222 -C -r ssh@127.0.0.1: / isitoreji/emulated/0/Download/el_file.txt.
Manje, yebo. Umsebenzi olandelayo: funda kahle i-Esperanto, ake sibheke ukuthi ngabe izifundo zeDuolingo zabaseSpain ziphumile, kulindeleke ngoJuni / Julayi.
Ezinye izimpawu ezingekho:
Ukuthola ; chofoza ku
Ukuze uthole ¿chofoza ku +
Ukuthola ? chofoza ku _
Ukuthola (chofoza ku *
Ukuthola) chofoza ku (
Ukuthola - chofoza /
Ukuthola = chofoza ku)
Ukuthola / chofoza &
Ukuthola _ chofoza?
Angikwazi ukusebenzisa i-genymotion kusuka kukhonsoli, kungithumela lokhu:
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: inguqulo CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/genymobile/genymotion/libQt5Core.so.5)
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: versionI-GLIBCXX_3.4.20 ′ ayitholakali (edingwa yi /opt/genymobile/genymotion/libQt5WebKit.so.5)
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: inguqulo CXXABI_1.3.8' not found (required by /opt/genymobile/genymotion/libicui18n.so.52)
./genymotion: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: versionI-CXXABI_1.3.8 ′ ayitholakali (edingwa yi /opt/genymobile/genymotion/libicuuc.so.52)
UJobe 1, './genymotion&' uphelile
Ngilande inguqulo ye-Ubuntu 15.04, ngoba angitholanga eyedlule, noma kunjalo, ngine-elementaryb os freya 0.3.2 ngokususelwa ku-Ubuntu 14.04, ngabe kunjalo?
Ngicabanga ukuthi i-libstdc ++ yakho. Ngakho-ke umtapo wezincwadi awukho njengamanje njengoba kudingeka. Vuselela amakhosombe akho noma inguqulo ye-Elementary.
Bheka lokhu okufakiwe:
Angikufundanga konke, mhlawumbe sekuvele kuphenduliwe.Uyixazulula kanjani inkinga yezikrini zokuthinta?
UFrancisco Javier kusho
Ku-Linux Mint 18 ngifake ama-Genymotion 2.8.1 64 bits. Konke kwahamba kahle. Ngingangeza idivaysi, ngivivinye kuze kufike koku-3 okuhlukile, kepha ngesikhathi "sokuvula" idivayisi, noma ngabe yini, uhlelo luxhomeke nge-"screen eyamukelekile" ye-android futhi akukho okusebenzayo (yize ngikwazi ukuhambisa isikhombisi mouse phezu kwesikrini) futhi ikhompyutha kufanele isethwe kabusha. Noma yikuphi ukusikisela okungahambanga kahle? Ngiyabonga.
Sengivele ngiyifakile iphakheji ye-genymotion-2.8.1_x64.bin kepha hhayi lapho ngizama ukuyikhipha, ayiqali uhlelo, faka ifolda / opt / genymobile / genymotion bese ngisebenzisa ifayili le-genymotion kodwa ngithola leli phutha / libib //ibib64.so.11 uphawu olungachazwanga: xcb_poll_for_reply6. Ngisebenzisa i-fedora 64. Ngingaluthokozela usizo lwakho.
Yebo, ngikwazile ukufaka i-genymotion kahle kepha uma ngiyivula ayenzi lutho, kungasizathu sini ukuthi ayiphenduli?
Lapho iqala, icela ilayisense, ngingayitholaphi?
Angikhumbuli futhi njengoba kubonakala ku-athikili, isicelo sokutholwa noma sokuvunyelwa kwelayisense! Mhlawumbe kuzoba ngcono ukwenza i-athikili yesimanje kuhlelo lokusebenza ukubona ukuthi yini entsha ngayo kwiLinux futhi uma ngabe manje ifuna ilayisense!
I-Red Hat inikeza ukubhaliswa kwamahhala konjiniyela